Free Thinker: March 2016
စည်းကမ်းရှိသော နိုင်ငံသားများဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း
စည်းကမ်းရှိသော နိုင်ငံသားများဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း (၂)
(ကျွန်ုပ်က ဖြစ်ပျက်နေသည့်အခြေအနေကြီးတစ်ခုကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပြခြင်းမျှသာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူသန်း ၆၀ လုံး ပျက်စီးသွားသည်ဟု ဆိုလိုရာမရောက်ကြောင်း စာဖတ်သူတို့ သိပါသည်။ ဦးဏှောက်ရှိသူ၊ ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်သူများကိုမူ မည်ကဲ့သို့ ပျက်အောင် ဖျက်နိုင်ပါအံ့နည်း။ ၎င်းတို့အသိပညာက ၎င်းတို့ကို ထိန်းကျောင်းသွားပါသည်။ ယခု ဤစာကို ရေးနေသော အကျွန်ုပ်သည်ပင် ဦးနေ၀င်းအာဏာသိမ်းသည့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သော ထိုစနစ်ဆိုးအတွင်းမှ သားကောင်တစ်ဦးဖြစ်ပေရာ ကျွန်ုပ်မပျက်စီးသဖြင့်သာ ဤစာကိုရေးနိုင်ကြောင်း မိတ်ဆွေတို့ကို ကြေငြာမောင်း ခတ်စရာပင် မလိုပါ။ ကဲ့ရဲ့ခြင်း အရင်မလိုပါနှင့်ဦးဟု မေတ္တာရပ်ခံပြစေ။)
ယခင် “ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းသူပြည်သားများ အဘယ်ကြောင့် စည်းကမ်းမဲ့ကြရသနည်း ဆိုခြင်းအကြောင်း” ဆောင်းပါးတွင် လက်ရှိ ဖြစ်နေရသော ပြဿနာများ၏ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေထားပါသည်။ အမေးတိုင်းတွင် အဖြေရှိ၏။ ပြဿနာ၏ ဇာစ်မြစ်ကိုသိမှ အဖြေမှန် (Answer မဟုတ်ပါ။ Solution ဖြစ်ပါသည်။) ကိုသိနိုင်မည်။ အဖြေမှန်ကိုသိပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကြလျှင် လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သို့သော် လူသည်စက်မဟုတ်။ စက်ပျက်လျှင် ပြင်ရလွယ်သည်။ မည်သည့်အပိုင်းကပျက်သနည်း ဆိုသည်ကို ရှာဖွေကာ ထိုအပိုင်းကို ပြင်လို့ရလျှင်ပြင်၊ ပြင်လို့မရလျှင် အသစ်နှင့် အစားထိုးလဲလှယ်လိုက်ပါက ကောင်းသွားမည်သာ ဖြစ်၏။ ဈေးကွက်တွင် ရှာဝယ်လို့မရနိုင်တော့လျှင်တောင်မှ မိမိဘာသာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ယုတ်စွအဆုံး၊ သည်စက်ကို လုံးဝ သုံးမရတော့ဘူး ဆိုအံ့။ တစ်လုံးလုံး လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး စက်သစ်ဝယ်သုံးနိုင်သေး၏။
သို့သော် လူပျက်တာကို ပြင်ဘို့မလွယ်လှပါ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်လောက် မျိုးနှင့် ရိုးနှင့်ချီကာ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသဖြင့် လူကြီး၊ လူရွယ်၊ လူငယ်အတော်များများ ပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ မပျက်ဘဲ ကျန်နေသူ များမှာ လက်တစ်ဆုပ်စာမျှသာ ရှိတော့၏။ ထိုမပျက်သေးသူများက စာများရေး၍တစ်နည်း၊ ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပ၍တစ်ဖုံ၊ သင်တန်းများပို့ချ၍ တစ်သွယ်၊ အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့် မိမိတတ်နိုင်သလောက် ပြန်လည်အဖတ်ဆယ်နေတာ တွေ့ကြရပါလိမ့်မည်။ သို့သော် တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်ဖွဲ့ချင်း ဤကဲ့သို့လုပ်နေရုံဖြင့် မည်မျှ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါမည်နည်း။ လူသန်း ၆၀ (သို့မဟုတ် ၅၁ သန်း) အတွက်မူ ဆင့်ပါးစပ် နှမ်းပက်သကဲ့သို့သာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
မြန်မာစကားတွင် တောင်းဆိုးပလုံးဆိုးသာ ပစ်လို့ရမယ်။ သားဆိုးသမီးဆိုးကိုတော့ ပစ်ရိုးထုံးစံမရှိ ဟူသော စကားပုံ ရှိ၏။ ဆိုးပေတေလိပ်၊ အလွန်အင်မတန် ပျက်စီးနေသူဖြစ်ပါစေ။ မည်သည့်နေရာသို့ သွားပစ်ပါမည်နည်း။ သည်နေရာက ပစ်လိုက်လျှင် ဟိုနေရာရောက်သွားကာ ရောက်သည့်နေရာတွင် ဒုက္ခဆက်ပေးနေဦးမည်သာ ဖြစ်လေသည်။ ထို့အတွက်အဖြေကား ထို သားဆိုး ကို သားကောင်းဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးရေးဖြစ်၏။
ယခု ဆိုးနေသည်က လူတစ်ဦး၊ တစ်စု၊ တစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်။ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးလိုလို ဖြစ်၏။ ပျက်သမှ ကိုယ်ကျင့်တရားများ ပျက်သည်၊ ယဉ်ကျေးမှုများပျက်သည်၊ ခံယူချက်များပျက်သည်၊ အသိပညာများ ပျက်သည်၊ အဆိုးဆုံးကား ကောင်းမွန်မှန်ကန် သည့် အတွေးအခေါ် အယူအဆများ ပျက်သုဉ်းသွားခြင်း ဖြစ်သတည်း။ ပျက်သည်ဆိုရာတွင် မြို့ပြတွင်သာ မဟုတ်။ တောလက် ကျေးရွာများတွင်ပါ ပျက်သည်။ လူငယ်များသာ မဟုတ်။ လူကြီးများလည်း ပျက်သည်။
ဤကဲ့သို့ ပျက်စီးနေကြသဖြင့်သာ ယခင်ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြခဲ့သလို အမှိုက်များ တွေ့ကရာပစ်ခြင်း၊ ကားများမောင်းချင်သလို မောင်း၊ ကျော်ချင်သလိုကျော်၊ ရပ်ချင်သလိုရပ်ခြင်း၊ မြစ်ချောင်းများအတွင်း ရေဆိုးရေပုပ်များ စည်းမရှိ၊ ကမ်းမရှိ သွန်ချခြင်း၊ စီမံကိန်းအတွက် ချပေးလိုက်သည့် ငွေကြေးကို အပြည့်အ၀မသုံးဘဲ စီမံကိန်းဘို့နည်းနည်း၊ မိမိအိပ်ကပ်အတွင်းသို့ များများ ထည့်ခြင်း စသည့် အမှုကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ယခု ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းကို သိပြီဖြစ်၍ ထိုပြဿနာများ၏ အဖြေကို ရှာကြည့်ပါမည်။
ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဖြစ်စေ၊ အဆောက်အဦတစ်ခုကို ဖြစ်စေ။ အသစ်ဆောက်ရတာက အဟောင်းကိုပြန်ပြင်ရတာထက် ပိုလွယ် သည်။ မိမိစိတ်ကြိုက် ဆောက်နိုင်သည်။ မိမိစိတ်ကြိုက် ပုံဖော်နိုင်သည်။ သို့သော် အဟောင်းကိုပြန်ပြင်ရတာကျတော့ နဂိုရှိပြီးသားအရာတွေကို ပြန်လည် ဖြိုဖျက်ပစ်ရသည်။ ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့် ကိုက်ညီအောင် လှီးထုတ်တန်တာ လှီးထုတ်၊ ထပ်ဖို့ တန်တာဖို့၊ ဖြတ်တန်တာ ဖြတ်။ လုပ်ရသည်။ ဤသို့လုပ်ရာတွင် အခန့်မသင့်ပါက ပြိုပျက်၊ ကျိုးပဲ့သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အဟောင်းကိုပြင်ခြင်းထက် အသစ်ဆောက်ရခြင်းက ပိုလွယ်သည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်၏။
တိုင်းပြည်တစ်ခုကို ထူထောင်ဘို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးနှင့် မဖြစ်နိုင်။ အထူးသဖြင့် ပျက်စီးနေသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုကို ပြန်လည် အဖတ်ဆယ်ဘို့အရာမှာ ပိုမလွယ်သေးသည်။
ဥပမာအနေနှင့် စင်ကာပူကို ပြပါမည်။
စင်ကာပူကို မလေးရှားမှ ခွဲထုတ်ချိန်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမှာ ရိုးရိုးသားသား တောသူတောင်သားများချည်း ဖြစ်၏။ ပကတိအရှိအတိုင်း ဘာမှ မပျက်စီးသေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရှိသည်။ ဤလူ့အဖွဲ့အစည်းကို မစ္စတာလီနှင့် သူ့အစိုးရ အဖွဲ့က သူရို့စိတ်ကြိုက် ပုံဖော်ယူသည်။ သူရို့သွားမည့်လမ်းခရီးတွင်ရှိသည့် ဆူးငြောင့်ခလုတ်မှန်သမျှ အကုန်ဖယ်ရှားပစ်သည်။ မိမိတို့တည်ဆောက်လိုသည့် ပုံသဏ္ဍာန်ရအောင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တည်ဆောက်ယူသည်။ သူတို့က တိုင်းပြည်အပေါ် တကယ် စေတနာထားသည်။ စင်ကာပူကို မိမိတို့လိုချင်သော ပုံစံရအောင် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ယူရမည်နည်း ဆိုသည်ကို သိသည်။ မိမိတို့မသိသည်များကို ပညာရှင်များနှင့်တိုင်ပင် ဆွေးနွေးသည်။ ကိုယ်ဘာမှမတတ်တာကို ၀န်ခံလျှက် နိုင်ငံခြားမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် အတတ်ပညာများ၊ အတတ်ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်သည်။ မိမိနိုင်ငံသားများကို ထူးချွန်ထက်မြက်သူများဖြစ်လာအောင် လေ့ကျင့်ပေးသည်။ နိုင်ငံကို ပညာရေးဖြင့်တည်ဆောက်မှသာ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်နေမည့် နိုင်ငံဖြစ်မည်ဆိုသည်ကို သဘောပေါက်သည့်အတွက် ပညာရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက် လုံးပမ်းသည်။ သူတို့က တိုင်းပြည်ထူထောင်ရာတွင် သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်နှင့် ထူထောင်တာမဟုတ်။ လူအရင်းအမြစ်နှင့် ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တော်တည့်ထက်မြက်သော၊ အမြော်အမြင်ကြီးသော၊ နိုင်ငံအပေါ် တကယ်စေတနာထားသော ခေါင်းဆောင်များ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် နိုင်ငံသားများက လည်း နောက်လိုက်ကောင်းပီသစွာ ကြိုးစားကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် သောက်စရာရေတောင်မရှိသော စင်ကာပူသည် ဆယ်စုနှစ် သုံးခုအတွင်း အာရှကျားတစ်ကောင်အဖြစ် ငွားငွားစွင့်စွင့် ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သည်။
ချမ်းသာသော မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ထိပ်ဆုံး၌ ရပ်တည်နေချိန်၌ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ယခုမှ စ,ထူထောင်ဘို့ စဉ်းစားရတုံးရှိသေးသည်။ သို့သော် စင်ကာပူနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ကျားဖြစ်သွားချိန်၌ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နွားပြန်ဖြစ်နေချေပြီ။
ယခုအခါ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှ ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများက မြန်မာပြည်ကို စင်ကာပူကဲ့သို့ဖြစ်အောင်လုပ်မည်ဟု မကြာခဏ ကြုံးဝါးနေသံကြားရသည့်အခါ ကျွန်ုပ်မှာ ၎င်းတို့အား လွန်စွာသနားလှသောကြောင့် စုပ်တသပ်သပ်ဖြစ်မိလေ၏။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ကြီးတစ်မြို့စာလောက်သာ ရှိသည်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ GDP per capita မှာ USD 55,980 ဖြစ်နေချိန်၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP per capita မှာ USD 1,113 သာ ရှိသည်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံသည် ကောင်းစွာထူထောင်ပြီး ဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဘ၀သာ ရှိသေးသည် . . စသည့် စသည့် အရေးကြီးသော အချက်များကို တစ်ချက်ကလေးမှ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါဘဲလျက် စင်ကာပူမှ အိမ်၊ လမ်းနှင့် သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးထားတာလောက်ကြည့်ပြီး ငါတို့လည်း ဒါလောက်တော့ လုပ်တတ်ပါတယ်ကွာ ဟု တွေးထင်သည့် ၎င်းတို့၏ အသိဉာဏ်၊ ဦးဏှောက်နှင့် တွေးခေါ်ချင့်ချိန် နိုင်စွမ်းတို့ကို သိမြင်နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုထူထောင်ရေးတွင် အရေးအပါဆုံးသူများမှာ Policy Maker များဖြစ်၏။ နိုင်ငံထူထောင်ရေးတွင် တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်းလုပ်၍ ရတာမျိုးမဟုတ်။ သူ့ကဏ္ဍနှင့်သူ တော်သည့်တတ်သည့်သူများကို တာဝန်ပေးရမည်။ နိုင်ငံခြားမှ ပညာရှင်များ ငှားရမ်းကာ အကြံဉာဏ်များ ရယူရမည်။
ကျွန်တော့်ဦးဏှောက် တစ်မိုက်လောက်နှင့် နိုင်ငံထူထောင်ရေးကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မပြောလိုပါ။ ကျွန်တော့်ထက် တတ်သိ၊ နားလည်သူများ အများကြီးရှိပါသည်။ ယခု ကျွန်တော်ဦးတည်နေသည်မှာ စည်းကမ်းရှိသောနိုင်ငံသားများဖြစ်အောင် အဘယ်ကဲ့သို့ လုပ်ယူရမည်နည်း ဆိုသည့်အကြောင်းဖြစ်သဖြင့် ထိုအကြောင်းကိုသာ ဆွေးနွေးပါမည်။
စည်းကမ်းရှိသော နိုင်ငံသားများ ဖြစ်လာစေရေးအတွက် ၎င်းတို့အား လုံလောက်သော ထောက်ပံ့မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန် လိုပါသည်။ ဤသို့ပံ့ပိုးရန် ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော စနစ်များ ထူထောင်ရမည်။ မည်သည့်စနစ်များကို မည်ကဲ့သို့ထူထောင်ရမည်ကို အကျဉ်းမျှ တင်ပြပါမည်။
ပထမဆုံး အရေးကြီးသည်မှာ ပညာရေးစနစ်ဖြစ်၏။ တိုင်းသူပြည်သားများ စည်းကမ်းရှိလာစေရေးတွင် ၎င်းတို့၏ အသိဉာဏ် ပညာ အဆင့်အတန်းကို မြှင့်ပေးရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ယခုလည်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပညာရေးစနစ်ကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲရန် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းနေကြသည်ဟု ကြားသိရ၊ သတင်းတွေဖတ်ရပါသည်။ သို့သော် ၃ နှစ်ကျော်လာသည့်တိုင် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာတာ မတွေ့ရသေးပါ။ လူငယ်များ၏ ဘ၀တစ်သက်တာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် ဆယ်တန်း စာမေးပွဲတွင်မတော့ ဂုဏ်ထူးများ ပိုထွက်လာတာ တွေ့ရပါသည်။ ဂုဏ်ထူးများပိုထွက်လာရုံဖြင့် အသိဉာဏ်ပညာ အဆင့်အတန်း ပိုမြင့်လာလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်ကတော့ မယူဆပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြက်တူရွေးပင်လျှင် သင်ပေးက ရွတ်တတ်သော ကြောင့်တည်း။
စာကျက်၍ အလွတ်ရွတ်ဖြေလို့ ဂုဏ်ထူးထွက်သည်မှာ ဘာမှမဆန်းပါ။ ဤသည်မှာ ပညာရတာမဟုတ်။ စာရတာသာ ဖြစ်ပါ သည်။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မတန်မရာပုံခိုင်းရလျှင် ပိဋကဋ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်ရုံမျှနှင့် အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်ကို မရနိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ပညာဟူသည် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နှင့် စဉ်းစားချင့်ချိန် တွေးခေါ်မြော်မြင်နိုင်စွမ်းကို ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် အလွတ်ကျက် ဖြေနေသော လက်ရှိပညာရေးရည်မှန်းချက်ကို ပြောင်းပစ်ရန်လိုပါသည်။ ပညာရေးရည်မှန်းချက်များတွင် တွေးခေါ်မြော်မြင် နိုင်စွမ်းရှိရေး၊ ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရေးတို့ ပါဝင်သင့်၏။
ယခု အတည်ပြုတော့မည်လိုလိုဖြစ်နေသည့် အငြင်းပွားစရာ ပညာရေးဥပဒေမှာလည်း လိပ်ခဲတည်းလည်း။ ပညာရေးဥပဒေကို မကြိုက်သည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးများအားလည်း လက်နှင့်ရွယ်လိုက်ကြသေးသည်။ ကျောင်းသားကလေးများ ကလည်း နု နုလှချည့်။ လက်နှင့်ရွယ်ရုံကလေးရွယ်တာတောင် ဆေးရုံဆေးခန်းရောက်ကြရသေး၏။ ရိုက်များရိုက်လျှင်ဖြင့် မတွေးဝံ့စရာ။
ပညာရေးဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံမှ တကယ့်ထိပ်တန်း ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများ ပါဝင်ရေးသားထားသည်ဖြစ်၍ ကျွန်တော့်မှာ မတို့ မထိရဲအောင်ဖြစ်ရ၏။ မိသားစုရှိရာ ပြည်တော်သို့ မကြာခဏပြန်နေရသေးသည့် အတွက်ကြောင့်လည်း မကြိုက်တာများ ရှိတာတောင် သိပ်မပြောရဲ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုသည်မှာ ယခုထိ စာအုပ်ထဲတွင် အိပ်ပျော်နေတုံးရှိသေးသည်။ မတော် ခဏ လောက် လိုက်ခဲ့စမ်းပါဆိုလျှင် ကိုယ်ကျိုးကြီးနည်းရချည့်။ ၂၀၁၆ လောက်ကျလျှင်တော့ ပြောသာဆိုသာရှိမည်လား မသိ။
လုပ်မလား၊ မလုပ်ဖူးလားဟု အတင်းအဓမ္မ ဓားနှင့်မိုးကာ စည်းကမ်းရှိခိုင်းစေရသည်ထက် တိုင်းသူပြည်သားတို့ ကိုယ့်အသိ စိတ်ဓာတ်နှင့်ကိုယ် လိုက်နာကျင့်ကြံကြပါမှ ပိုမိုထိရောက် အကျိုးရှိနိုင်ပေမည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးတို့ကို အသိပညာပေးရေး အစီအစဉ်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြုလုပ်ပေးရန် လိုပါသည်။ လုပ်သည်ဆိုရာတွင်လည်း ဂေါ်ဇီလာလောက် ဆိုင်းဘုတ်ကြီးများထောင်၊ နောက်ပြီး လူကြားကောင်းရုံ အဖြစ်လုပ်ပြ။ အဆုံးတွင် တစ်အိမ်တစ်ယောက်မထွက်မနေရ စနစ်ဖြင့် အတင်းလာခိုင်းကာ အောင်ပွဲကြီးများ ချိမ့်ချိမ့်သဲကျင်းပဘို့ ပြောတာမဟုတ်။ တကယ် ထိရောက်၊ အကျိုးရှိမည့် ပညာပေး အစီအစဉ်များကို စနစ်တကျ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်၏။
ပညာရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်လည်း ငါတို့နိုင်ငံမှာ ငါတို့စနစ်နဲ့ငါတို့သွားမယ် ဟု ငါတကော ကော၍မရ။ အောင်မြင်နေသော ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်များ၏ ပညာရေးစနစ်များကို လေ့လာ၊ အတုယူကာ မိမိတို့ လူနေမှုစနစ်နှင့်ကိုက်ညီအောင်၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုအောင် ရေးဆွဲရန် လိုပါသည်။
နောက်တစ်ခုမှာ မြို့ပြစနစ် ဖြစ်၏။ မြို့ပြစနစ်မှာ အလွန်ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ကျွန်တော်သည် မြို့ပြပညာရှင်တစ်ဦးမဟုတ်မူ၍ ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက် စင်ကာပူမှ စနစ်များကို အခြေခံကာ ပြောကြည့်ပါမည်။ ဒေါက်တာကျော်လတ်ကဲ့သို့ မြို့ပြစီမံကိန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက ကျွန်တော့်ထက်ပို၍ တတ်ကျွမ်းနားလည်ပါသည်။
မြို့သူမြို့သားများ စည်းကမ်းလိုက်နာလာစေရေးအတွက် စနစ်ကျသော မြို့ပြတစ်ခု တည်ဆောက်ပေးရန် အလွန် အရေးကြီးပါ သည်။ ကျွန်တော် စင်ကာပူမှစနစ်များဖြင့် ယှဉ်ကာ ရှင်းပြပါမည်။ (ကျွန်တော်ရေးသားသော စင်ကာပူမှအမှိုက်သိမ်းစနစ်၊ ရေပေးဝေရေး စနစ်၊ မီးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးစနစ်၊ ရေဆိုးထုတ်စနစ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၊ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စနစ်များအကြောင်း စင်ကာပူမှစနစ်များ အမည်ဖြင့် နှင်းဆီဖြူစာပေမှ ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်နေပါသည်။ စင်ကာပူစနစ်များကို အသေးစိတ် လေ့လာလိုသူများ ထိုစာအုပ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဤကား စကားချပ်။)
မြို့ပြနေပြည်သူများ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အမှိုက်မပစ်စေရေးအတွက် အစိုးရမှ အလွန်ကောင်းမွန်သော အမှိုက်သိမ်းစနစ်တစ်ရပ် ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုပါသည်။ စင်ကာပူအစိုးရသည် အမှိုက်သိမ်းရေးအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဒေသလေးခုခွဲကာ ကန်ထရိုက်တာလေးဦးကို တာဝန်ပေးထားသည်။ (၎င်းကိုယ်တိုင် အမှိုက်မသိမ်းပါ။) ထိုကန်ထရိုက်တာလေးဦးက မိမိ တာဝန်ကျရာဒေသမှ အမှိုက်များကို မိမိဘာသာ နိုင်နိုင်နင်းနင်း ရှင်းထုတ်သွားသည်။ နေရာတစ်ခုခုတွင် အမှိုက်များပုံနေပါက ကန်ထရိုက်တာကို လှမ်းသတင်းပေးလိုက်ရုံ ဖြစ်၏။
အမှိုက်သိမ်းရေးကို တာဝန်ယူသည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာ NEA (National Environment Agency) ဖြစ်ပါသည်။ NEA က အမှိုက်သိမ်းရေး အစီအမံများ (Waste management) ကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်၏။ ကန်ထရိုက်တာများ၏ အမှိုက်သိမ်းမှု အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်အကဲခတ်သည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံ သန့်ရှင်းသပ်ယပ်နေစေရေးအတွက် တာဝန်ယူထားသည်။ ပြည်သူ များ အမှိုက်မပစ်စေရန် ပညာပေးအစီအစဉ်များ လုပ်ပေးသည်။ အမှိုက်စုဆောင်းရေး ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်သည့် Environmental Public Health (General Waste Collection) Regulations အရ ဥပဒေမလိုက်နာသူများကို အပြစ်ပေး အရေးယူသည်။
အမှိုက်ဟူသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်လျက်ရှိရာ အမှိုက်များကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ရှင်းနိုင်စေရေးအတွက် အမြဲကြိုးစားနေသည်။ အိမ်များမှထွက်သောအမှိုက်၊ စားသောက်ဆိုင်များမှ ထွက်သောအမှိုက်၊ စူပါမားကက်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စသည်တို့မှထွက်သော အမှိုက်များကို မီးရှို့တန်တာမီးရှို့၊ မြေဖို့တန်တာဖို့၊ ပြန်သုံးသင့်တာသုံး (recycle) လုပ်သည်။ Zero waste Singapore အစီအစဉ်ဖြင့် ပစ်လိုက်သမျှအမှိုက်များကို အလဟဿဖြစ်မသွားစေပဲ အားလုံး ပြန်သုံးနိုင် စေရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။
စင်ကာပူအမှိုက်သိမ်းစနစ်သည် အလွန်ကောင်းသဖြင့် အိမ်များ၊ ဆိုင်များ၊ စက်ရုံများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများအနေနှင့် ထွက်လာသမျှ အမှိုက်များကို အလွယ်တကူ ပစ်နိုင်သည်။ အမှိုက်အတွက် မည်သည့်နေရာမှ တကူးတက သွားနေစရာမလို။ မိမိအိမ်နှင့် လက်လှမ်းတမီတွင်ပင် ပစ်နိုင်သည်။ ယခင်ကာလများက ဆောက်ခဲ့သော တိုက်အဟောင်းများတွင် မီးဖိုချောင်အတွင်း အမှိုက်ပစ်ချသည့်မြောင်း လုပ်ထားပေးကာ အမှိုက်ကို မိမိအိမ်ခန်းထဲမှနေ၍ပင် ပစ်ချလို့ရသည်။ ယခု HDB flat များတွင် အမှိုက်ပစ်ချသည့် မြောင်းကို အိမ်ခန်းများ၏ အလယ်လောက်တွင် ထားပေးသည်။ အစွန်ဆုံးအိမ်ခန်းမှ အမှိုက်ပစ်ရာနေရာသို့ တစ်မိနစ်အတွင်း ရောက်နိုင် သည်။
ထို့ပြင် ဘူတာရုံများ၊ ဈေးကြီးများ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်၊ ပန်းခြံ၊ လူနေတိုက်ခန်းများအောက်တွင် အမှိုက်ပုံးများကို လက်လှမ်း တမီတွင်ထားပေးသည်ဖြစ်ရာ အမှိုက်ပစ်လိုလျှင် တကူးတကလိုက်ရှာနေစရာမလို။ အနီးရှိအမှိုက်ပုံးတွင်း ပစ်ထည့်လိုက်ရုံ ဖြစ်၏။ ထို့ပြင် အခြားသူများက အမှိုက်ပုံးအတွင်း ထည့်နေသည်ကို တွေ့မြင်နေခြင်းကလည်း မိမိအနေနှင့် တွေ့ကရာ အမှိုက်မပစ်စေရန် သတိပေးနေသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ နေရာတကာ အမှိုက်မရှိ၊ သန့်ရှင်းသပ်ယပ်နေခြင်းက အမှိုက်ကို တွေ့ကရာပစ်ရန် လက်တွံ့ စေလေ၏။
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ပြန်သည့်အခါ ပြဿနာတစ်ခုမှာ အမှိုက်ကို မည်သည့်နေရာတွင် ပစ်ရမှန်းမသိခြင်း ဖြစ်၏။ ကျွန်တော်က စင်ကာပူတွင်နေတာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုနီးပါးရှိပြီဆိုတော့ အမှိုက်ကို တွေ့ကရာမပစ်တတ်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ထဲ စသည်ဖြင့် အပြင်ထွက်သည့်အခါ တစ်ခုခုစားသောက်ပြီးသည့်အခါ သို့မဟုတ် တစ်ရှုးစသည့် အမှိုက်များကို လက်ကကိုင်ထားရလေသည်။ ထို့နောက် အမှိုက်ပုံးကို ယောက်ယက်ခတ်အောင် ရှာပြီး တွေ့သည့်အခါမှ ပစ်ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်သိထားသည့် အမှိုက်ပစ်၍ရသည့်နေရာထိ သယ်လာပြီးမှ ပစ်ရသည်။
ကျွန်တော်တို့နေတာက ကမာရွတ်၊ ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ယာမှာ။ အမှိုက်ပစ်စရာနေရာ လုပ်ပေးမထား။ အမှိုက်ကို ညနေ ၃ နာရီတွင် တစ်ကြိမ်၊ ၅ နာရီတွင်တစ်ကြိမ် လာသိမ်းသည်ဟု အစ်မကြီးပြောပြသဖြင့် သိရ၏။ သူတို့က အိမ်များမှ အမှိုက်များကို တွန်းလှည်း ဖြင့် တစ်ပါတည်း သိမ်းသွားသည်။ သူတို့အမှိုက်လှည်းလာမည့်အချိန်ကို စောင့်နေရသည်။
ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးမှာ အလုပ်လုပ်နေသည်ဖြစ်ရာ အိမ်သို့ ညနေ ၆ နာရီလောက်မှ ပြန်ရောက်သည်။ အိမ်တွင် သူနှင့် သားနှင့် နှစ်ယောက်တည်းသာ နေသည်။ သားက ၂ တန်းကျောင်းသား။ ညနေကျမှ အမေဖြစ်သူနှင့် အတူတူအိမ်ပြန်ရောက်သည်။ သို့အတွက် ၅ နာရီလာသိမ်းသော အမှိုက်လှည်းကို မမီ။ ထိုအခါ မိမိအိမ်မှအမှိုက်ကို သူများလည်း မပေးချင်၍ အိမ်အနီးမှ လွတ်နေသော ကွက်လပ်တွင် အများသူငါနည်းတူ ပစ်လေသည်။ အနို့ သည်နေရာမပစ် ဘယ်နေရာသွားပစ်ပါမည်နည်း။ ဒါ တစ်နေ့ထဲမဟုတ်။ နေ့တိုင်းဖြစ်သည်။
သူတို့စနစ်က အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာဖြစ်၏။ ယခင်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှေ့မှ လမ်းကြားလေးထိပ်တွင် ပုံခွင့်ပေးကာ အမှိုက်ကားက လာရှင်းတာ ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်တုံးကမှ အဟုတ်သား။ အမှိုက်ပုံတွင် ပစ်လို့ရသေးသည်။ ယခု ထိုနေရာတွင် အမှိုက်ပုံခွင့်မပြုတော့ဘဲ အမှိုက်လှည်းများဖြင့် လာသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်ရိပ်မွန်၊ (၈) ရပ်ကွက်အတွင်း မည်သည့်နေရာတွင်မှ တရားဝင် အမှိုက်ပစ်စရာနေရာ လုပ်ပေးမထား။ သည်တော့ လွတ်သည့်နေရာတွင် ပစ်ကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့တိုက်ဘေး ကပ်လျက်တွင် မည်သည့် အဆောက်အဦးမှ မဆောက်ရသေးသော မြေကွက်လပ်ကြီးတစ်ခု ရှိ၏။ ထိုနေရာသည်ကား ဤအနီးနေသူတို့ အမှိုက်ပစ်ရာနေရာ ဖြစ်နေတော့ သည်။ ကျွန်တော်သည်ပင်လျှင် ငှက်ပျောသီးစားပြီးပါက ထိုနေရာသို့သာ ပစ်လိုက်ရသည်။
ကျွန်တော်ကား မည်သည့်အခါမှ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့နေတတ်သူမဟုတ်။ စည်းကမ်းမဲ့ခြင်းကို မစင်ကဲ့သို့ ရွံမုန်းတတ်သလို အခြား သူများ စည်းကမ်းမရှိလျှင်လည်း အင်မတန် ကဲ့ရဲ့တတ်၏။ မိတ်ဆွေများဖြစ်လျှင်မူ အားမနာတမ်း တည့်တည့်ပြောတတ်လေ သည်။ သို့သော် အမှိုက်ပစ်စရာနေရာမရှိသည့် (၈) ရပ်ကွက်၊ ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ယာမှ အခြေအနေများက ကျွန်တော့်အား စည်းကမ်းမဲ့သူဖြစ်အောင် အတင်းတွန်းပေးနေလေ၏။ ရန်ကုန်ပြန်သည့်အခါတိုင်း ကျွန်တော့်မှာ အတော် စိတ်မသက်မသာ ခံစားရလေသည်။
မြန်မာပြည်သားလူအများတို့ကို စည်းကမ်းမဲ့လှချည့်ဟု ကဲ့ရဲ့သာနေသည်။ စည်းနှင့်ကမ်းနှင့်နေချင်လာအောင် မည်သည့်အရာမှ ပံ့ပိုးပေးမထား။ နင်တို့လိုစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့တွေနဲ့ ဘယ့်နှာလုပ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်မလဲ ဟု ကိုယ်အသုံးမကျတာကို နိုင်ငံသားများအား လွှဲချနေသူများသို့ နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်ပြန်လာလျှင် အမှိုက်ပစ်စရာနေရာတွေ မြင်ချင်ပါသည်ဟုသာ ပြောလိုပါသည်။
နောက်တစ်ခုက ကားများကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ရပ်ရခြင်းဖြစ်၏။
ကျွန်တော်တို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၈) ရပ်ကွက်တွင် ၈ ထပ်တိုက် ၉ လုံးရှိသည်။ တစ်ထပ်လျှင် ၆ ခန်း (အချို့တိုက်များမှာ ၄ ခန်း) နှုန်းဖြင့် တိုက်တစ်လုံးတွင် ၄၈ ခန်းရှိ၏။ ဆိုတော့ ထိုရပ်ကွက်တွင် အခြားလုံးချင်းအိမ်များမပါ တိုက်ခန်းအိမ်ယာချည်း ၃၈၄ ခန်း၊ အိမ်ထောင်စု ၃၈၄ စုခန့် နေထိုင်ကြသည်။ နောက်ဆောက်သော ၈ ထပ်တိုက် မှ ၁၆ ခန်းနှင့်ပေါင်းလိုက်ပါက ဤရပ်ကွက်တွင် အိမ်ထောင်စု ၄၀၀ ရှိ၏။ အစိုးရအရာရှိမင်းများက ကျွန်ုပ်တို့ ဤရပ်ကွက်နေသူများအား ငမွဲများအောက်မေ့ကာ ကားရပ်ဘို့နေရာ စီစဉ်ပေးမထားဘဲ အိမ်ချည်း အပြည့်ဆောက်ထား၏။ သို့သော် ကျွန်ုပ်မှလွဲ၍ ကျန် အိမ်ထောင်စုတော်တော်များများမှာ ကားဝယ်စီးနိုင်ကြသည် ဖြစ်ရကား ၎င်းတို့ပိုင်ကားများကို ရပ်စရာနေရာမရှိ၍ မိမိတို့တိုက်ရှေ့တွင်ပင် ရပ်ထားကြရ၏။ တိုက်တစ်လုံး တစ်အိမ်ထောင်ဆို ဘာမှ အကြောင်းမဟုတ်။ ခုတော့ တိုက်တစ်လုံးလျှင် ဆယ်ဂဏန်းမျှသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကားပိုင်သည်ဖြစ်ရကား ကားများမှာ အိမ်ရှေ့လမ်းများပေါ်တွင် ကြပ်သိပ်ရပ်ထားရလေသည်။ လမ်းဟိုဘက်သည်ဘက်ကို ခွကာ ကားများကို ရပ်လိုက်သည့်အခါ လမ်းမှာ ကားတစ်စီးသွားသာရုံမျှ ရှိတော့၏။ ထိုကျဉ်းမြောင်းလှသော လမ်းကလေးပေါ်တွင်ပင် ကား၊ ဆိုက်ကား၊ လူ၊ တွန်းလှည်းစသည်တို့ သွားကြရလေရာ အလွန်အန္တရာယ်များလှပါသည်။
ယုတ်စွအဆုံး ခေတ္တကားရပ်စရာပင် နေရာမရှိ။ ကားများမှာ လမ်းနှစ်ဘက်စလုံးတွင် ရပ်ထားကြရသည်ဖြစ်၍ လမ်းအလယ်၌ ကားတစ်စီးသွားသာရုံမျှသာ ကျန်တော့ရာ ထိုနေရာတွင် ခေတ္တခဏ ကားရပ်လိုက်သည်ဆိုလျင်ပင် လမ်းပိတ်သွားတော့သည်။ ကျွန်တော် ဧပြီလက သားရှင်ပြုအတွက် ရွာသွားရန် ဘတ်စ်ကားကြီး တစ်စီးငှားသည်။ ပစ္စည်းပစ္စယများတင်ရန် ကားကြီးကို အိမ်ရှေ့တွင်ပင် ရပ်ထားရသည်။ ပစ္စည်းများတင်နေစဉ် လမ်းပိတ်နေ၏။ အပြင်မှ ပြန်လာသောကားတစ်စီးက ရပ်စရာနေရာ မရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ဘတ်စ်ကားကြီးရှေ့တွင် ပိတ်ရပ်သွားသည်။ နောက်ဘက်တွင်လည်း တစ်စီးရပ်ထားပြန်၏။ ဘတ်စ်ကားကြီး ထွက်မယ် လုပ်တော့ ရှေ့ရောနောက်ပါ ပိတ်နေသဖြင့် ထွက်လို့မရ။ ကားထွက်နိုင်ဘို့အရေး ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဤနေရာတွင် နာရီဝက်ကြာသည်။
ဤဖြစ်ရပ်မျိုးမှာ ကျွန်ုပ်တို့ (၈) ရပ်ကွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်။ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး ဤအတိုင်းချည်းဖြစ်လေရာ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဤကဲ့သို့သော ပြဿနာပေါင်းမည်မျှရှိလေမည်ကို တွေးကြည့်ရုံနှင့် ရင်မောလှပါသည်။
ဟိုးယခင် ကားများသိပ်မရှိသေးခင် ကာလများကဆောက်ခဲ့သော အဆောက်အဦးများကိုထားပါ။ ကားဦးရေမများသေးသဖြင့် ကားရပ်နားရာနေရာကို ထည့်မစဉ်းစားဟု အကြောင်းပြပါက ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာရှိသေးသည်။ သို့သော် ယခုခေတ် ဤမျှ များပြားလှ သောကားများကို တွေ့မြင်နေရပါလျှက် ယခုခေတ်ဆောက်သည့် အဆောက်အဦများတွင် ကားရပ်နားရာနေရာကို ထည့်သွင်း မစဉ်းစားခြင်းကား အလွန်နုံချာညံ့ဖျင်းလှသော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အမြော်အမြင်နည်းမှု၊ အသိဉာဏ်ပညာချို့တဲ့မှုပင် ဖြစ်တော့၏။
၎င်းတို့၏ အမြော်အမြင်နည်းပါးမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကား ဤ ကားရပ်သည့်နေရာတစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်။ သြချယူရ လောက်အောက်ပင် ဘက်စုံထောင့်စုံ ညံ့ဖျင်းလှပါပေသည်။
ကားပိုင်ရှင်များအတွက်သာမက ကားမပိုင်သည့်သူများအတွက်ရော ဘာစဉ်းစားပါသနည်း။
ဘတ်စ်ကားရောက်သည့်နေရာများတွင်မူ လမ်းတစ်လမ်းထဲ၌ ဘတ်စ်ကား လိုင်းပေါင်းများစွာ ပြေးဆွဲပေးသော်လည်း ဘတ်စ်ကား မရောက်သည့်နေရာ၌မူ တစ်စီးမှ မရှိပါ။ ဘတ်စ်ကားလိုင်းများကို စီမံခန့်ခွဲပေးသည့် (ယခင်ကအခေါ် မ.ထ.သ၊ ယခုတော့ မည်သို့ခေါ်သည်မသိပါ) အလွန်အမြော်အမြင်နည်းပါးလှသော
ရန်ကုန်၌ ဘတ်စ်ကားလိုင်းများပြေးဆွဲပုံ ရောက်သင့်သည့်လမ်းများ မရောက်ပုံ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းပုံ
ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ ထားပုံ။ လိုင်းပေါက်မှတ်တိုင်ကို ဖျက်လိုက်ပုံ
အိမ်သာအလွယ်တကူသွားရန် မြို့တွင်းမြို့ပြင် မည်သည့်နေရာမှ မရှိပုံ။ ဘူတာရုံမှ အိမ်သာများ အလွန်ညစ်ပတ်ပုံ
ရေမြောင်းစနစ်၊ ၅ ပေအကျယ်၊ ၅ ပေအနက်ရေမြောင်းတူးခိုင်းသူအား ဆယ်သိန်းလောက်ပေးချင်၊ ဆုချတာမဟုတ်ဘဲ မဟုတ်က ဟုတ်က အမိန့်များလျှောက်ထုတ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ဖျက်ဆီးနေမည့်အစား တောသွား၍ ယာထွန်စားရန် အရင်းအနှီးပေးလိုခြင်း ဖြစ်
ကလေးကစားကွင်းမရှိ၊ အပန်းဖြေရန် အောက်ဆင်းထိုင်ရန် ထိုင်ခုံမရှိ၊ အဖေကြီး ကွမ်းယာဆိုင်၌ ထိုင်ရပုံ
လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတားအောက်၌ ကလေးများ စကိတ်စီး ကစားရပုံ
ယခင်က ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို မြန်မာ့မူမြန်မာ့ဟန်ပြောင်းကာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ဟု လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုလည်း ဘာတဲ့ “စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ” ဆိုပါလား။ သူတို့ပြောပုံဖြင့် အခြားတိုင်းပြည်များမှ ဒီမိုကရေစီများမှာ စည်းကမ်းမဲ့လှသော ဒီမိုကရေစီများ ဖြစ်နေသယောင်ယောင်။ ဤသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အနှီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမှာ သူများစီလို့သာ ယောင်တောင် ပေါင်တောင် လိုက် စီ ရသည်။ ဒီမိုကရေစီဆိုသည်ကို ရေရေရာရာမသိဘဲ ရမ်းတုတ်နေမှန်း သိသာလှ၏။
ပုသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးမှ မိုင်တိုင်များကို ဓားဖြင့်ခွဲသွားခြင်း
သောက်ရေအိုးမှ ရေခွက်များကို သံကြိုးဖြင့် ချည်ထားရခြင်း
၁၄ ဇွန်၊ ၂၀၁၅။ ည ၁၀း၃၈ နာရီ
Posted by အေးငွိမျး at 12:55 PM0comments Links to this post
ဘာပြောင်းဘို့လိုသလဲ နှင့် ပထွေးက အဖေထက်ပိုကောင်းခြင်း
ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့် ဤစာကိုရေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က အပြောင်းအလဲကိုအလိုရှိသည်။ ပြောင်းလဲဘို့ NLD ကို မဲပေးပါ ဟု တစ်နိုင်ငံလုံးပွက်လောရိုက်အောင် အော်ကြသောအခါ နားမခံနိုင်သည့် သမ္မတကြီးက ပြောင်းလဲရအောင်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းပြီးမှဟာ ဘာပြောင်းဘို့ လိုသေးလဲ၊ ဒါ့ထက်ထပ်ပြောင်းရရင် ကွန်မြူနစ်ပဲရှိတော့တာပဲ ဟု လူကြီးတန်မဲ့ အဓိပ္ပာယ်ယတ္ထာယ မဲ့သောစကားကို ဆိုသည့်အခါ ကျွန်ုပ်မှာ အံ့သြလွန်းလို့ သေလုမတတ်ရှိချေသည်။
(သူ့အဖေက “ဘာပြောင်းဘို့လိုသလဲ” ဆိုတော့ “ပြောင်းလဲနေတာကို မသိဟန်ဆောင်ပြီး ကျောက်ချရပ်နေခဲ့လို့ပါ” ဟု ပုလင်းတူ ဘူးဆို့ လုပ်သူကလုပ်သေးသည်။)
၎င်းတို့ပြောခဲ့သော ပြောင်းသည်ဆိုခြင်းကား စစ်ယူနီဖောင်းမှ အရပ်သား ယူနီဖောင်းသို့ပြောင်းခြင်းမျှဖြစ်၍ ကျန်တာ ဘာတစ်ခုမှ ပြောင်းတာမရှိ။ ပိုလို့ပင် ဆိုးလာသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့် ပိုဆိုးသည်ဟု ကျွန်ုပ်ပြောသနည်း။ ထောင်ကိုအိမ်လုပ်နေသူများအား ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ လွှတ်ပေးသည်။ ထိုအခါ ဆိုးသွမ်းလှသဖြင့် သွားဖမ်းသူကို ရဲကိုတောင် သတ်လွှတ်လိုက်သေးသည်။ လူကြီးလူကောင်း သားသမီးများက ဣနြေ္ဒသိက္ခာရှိစွာ မဲဆွယ်နေသည်ကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဓားနှင့် ၀င်ပိုင်းသည်။ ဤသည်ကိုတောင် မျက်စိမှိတ်ပြီး ပြောင်းနေပြီဟု အတင်းရော အဓမ္မပါ ဇွတ်ငြင်းနေလေရာ ၎င်းတို့ အတွက် ကျွန်ုပ်မှာ ပြောစရာစကားပင် မရှိတော့ပါ။ (ရန်ငြိုးရန်စမရှိဘဲ ဓားနှင့်အတင်းဝင်ခုတ်တာကိုတောင် ကိုယ်မကြိုက်လို့ ဓားနဲ့ခုတ်တာ သူတို့မှာ ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဟု ဟို သင်္ကန်းပတ်ထားပြီး လင်မယားကိစ္စ၀င်ရှုပ်နေသော သူက ပြောလိုက်သေး၏။)
ဘာပြောင်းဘို့လိုသလဲဆိုတာ ထို လက်တဆုပ်စာ အာဏာရူးများကလွဲ၍ ကျန်မြန်မာပြည်သားအားလုံးသိသည်။ ဒါ ကျွန်ုပ်ပြောစရာမလိုပါ။
ကျမက မျက်ရည်လွယ်တတ်တဲ့သူမဟုတ်သလို အလွယ်တကူလည်း ငိုတတ်တဲ့ မိန်းမ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို မုန်းလွန်းလို့၊ တမင်ကို အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ ငိုပစ်လိုက်တယ် ဟု သူကပြောသည့်အခါ ကျွန်တော့်မှာ အလွန် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရသည်။ ကိုယ်က ဘာကောင်မှမဟုတ်၍ ဘာမှ ကူညီမပေးနိုင်သည့်အတွက်လည်း ၀မ်းနည်းမိ၏။
ကျွန်တော်က အချိန်ပြည့် safety officer အလုပ်လုပ်နေသဖြင့် BCSS သင်တန်းကို တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်များမှသာ သင်ရသည်။ BCSS က လေးရက်သင်တန်းဆိုတော့ တနင်္ဂနွေ လေးရက်သင်သည်။ တစ်လမှာ တနင်္ဂနွေက လေးရက်သာရှိသဖြင့် ကွန်တော့်မှာ ရက်အားမရှိ။ စနေနေ့တွင် CSOC ကလည်း သင်ရသေး၏။ သည်တော့ သားဖြစ်သူကို ဘယ်မှလိုက်မပို့နိုင်။ တခါလာလည်း ဂျူးရောင်းပွိုင့်၊ တခါလာလည်း ဂျူရောင်းပွိုင့်ဟု သူက ကွန်ပလိန်းတက်၏။ ယခု နိုဝင်ဘာတွင် တနင်္ဂနွေ ငါးရက်ပါသည်ဖြစ်ရာ တစ်ရက်နားရသည်။ ထို့ကြောင့် ရှားရှားပါးပါး ထိုနားရက်တွင် သားတို့ကို ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယို လိုက်ပို့၏။
ပထမဆုံး ရိုလာကိုစတာစီးပြီး နောက်တစ်နေရာဆက်စဉ် လမ်း၌ ဖုံးဝင်လာ၏။
သူက နေ့စေ့လစေ့ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး လက်ရှိအိမ်အကူက နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်မှာဆိုတော့ နောက် အိမ်အကူတစ်ဦးထပ်လျှောက်သည်။ စင်ကာပူတွင် အိမ်အကူလျှောက်ရတာ မလွယ်လှပါ။ ပထမဆုံးအိမ်အကူ ဖြစ်လျှင် အိမ်ရှင်ဖြစ်သူသည် သင်တန်းသွားတက်ရသည်။ အိမ်အကူအတွက် လုံခြုံရေးအာမခံ၊ ဆေးအာမခံများဝယ်ရသည်။ အိမ်အကူ ရောက်လာလျှင် ဆေးစစ်ရမည်၊ အိမ်အကူများသိသင့်သိထိုက်သည်များကို သင်ပေးသည့် အခြေခံသင်တန်းတက်ဘို့ စီစဉ်ရ သည်။ အားလုံးပြီးလို့ IPA letter ရပြီဆိုတော့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်။ စင်ကာပူခေါ်ရ၏။
စင်ကာပူအိမ်ရှင်များကတော့ အေးဂျင့်မှ ခေါ်၏။ သို့သော် ယခုဖုံးဆက်သည့်အမျိုးသမီးကမူ သူ့ဘာသာ လျှောက်တာ ဖြစ်သည်။ ဆိုတော့ IPA letter ရသည်နှင့် လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ပို့လိုက်ကာ မြန်မာပြည်မှ မိန်းကလေးကို လှမ်းခေါ် လိုက်သည်။ သည်တွင် ကိစ္စများတော့၏။
အနှီမိန်းကလေး လေဆိပ်ရောက်တော့ အိမ်ဖော်များကို နိုင်ငံခြားလွှတ်ခြင်းအား မြန်မာအစိုးရမှ ပိတ်ပင်ထားသောကြောင့် သွားခွင့်မပြုနိုင်ပါ ဟု ဆိုကာ ထိုမိန်းကလေးအား လေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်မပြုသဖြင့် ဒုက္ခနှင့်လှလှနှင့် တိုးလေတော့၏။
သူတို့လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသောကြောင့် ကောက်ရိုးတမျှင်အနေနှင့် ကျွန်ုပ်ထံဖုံးလှမ်းဆက်၏။ ကျွန်တော်လည်း ရနိုင်တတ်သမျှသော အဆက်အသွယ်ဖုံးနံပါတ်ကို ရှာဖွေပေးလိုက်၏။ ဒီကနေ့တော့ လေယာဉ်ထွက်ချိန်မမီတော့သောကြောင့် နက်ဖြန်မှ လုပ်ပေးမည်ဟု သိရလေသည်။ လုံးဝလုပ်လို့မရတာထက်စာရင်တော့ လေယာဉ်လက်မှတ်ပြန်ဝယ်ရတာ အပုံကြီး တော်သေးသည်ဟုတွေးကာ ကျွန်ုပ်လည်း ဟင်း ချနိုင်လေတော့၏။ ထို့နောက်တော့ အနီတွေရောအပြာတွေရော ရှိသမျှ ရိုလာကိုစတာ အကုန်စီးကာ သားအဖနှစ်ယောက် ခေါင်းများ ချာလပတ်ရမ်းလျက် ယိုင်တိယိုင်ထိုးနှင့် ပြန်ခဲ့လေသတည်း။
သို့သော် ဇာတ်လမ်းက သည်တွင်မရပ်။
သည်ကနေ့မနက် ဟို မမကလေးဆီ အကျိုးအကြောင်းသိရအောင် လှမ်းဖုံးဆက်တော့ သူက မောကြီးပန်းကြီးနှင့် ဇာတ်စုံ ခင်းပြသည်။ ကိုယ်ဝန်က နေ့စေ့လစေ့ဆိုတော့ စကားပြောရတာ ပင်ပမ်းလှ၏။ သို့တိုင် သူကလည်း ပြောချင်၊ ကျွန်တော် ကလည်းသိချင် ဆိုတော့ သူက စုန်ရေဆန်ရေ အကုန်ပြောပြသည်။
ကျွန်တော်ပေးလိုက်သည့်အဆက်အသွယ်နှင့် အဆင်မပြေဟု ဆိုသည်။ နောက်တော့ သည်ကိစ္စများကို လိုင်းဝင် လုပ်ပေးနေ သည့် အေးဂျင့်နှင့် ဆက်မိသည်ဆို၏။ အေးဂျင့်ကို နှစ်သိန်းပေးရမည်။ လေယာဉ်လက်မှတ် ပြန်ဝယ်ကာ ၇ ရက်နေ့ လာရမည် ဆို၏။ (စကားစပ်၍ ပြောရလျှင် မြန်မာပြည်ရှိ ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးအရာများထဲ၌ တစ်ခုမှာ ထို “လိုင်းဝင်” ခြင်း ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချစ်လှစွာသော သမ္မတကြီးက ဘာပြောင်းဘို့လိုသေးလဲ မေးသည်ကို အဲဒီလိုင်းဝင်တာကြီး ပျောက်သွားအောင် လုပ်ဖို့ဟာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပေါ့ဗျ ဟု ပြောလိုက်ချင်သည်မှာ ပါးစပ်ကို ယားနေပါသည်။)
သို့နှင့် မမကလေးက သံရုံးသို့သွား၏။ သံရုံးကစာနှင့်ဆိုလျှင် အေးဂျင့်ကိုပေးရတာ ပိုများသက်သာလေမလားပေါ့။ သူက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြတော့ သံရုံးမှ တစ်ယောက်က ရှင်းပြသည်။
ဟုတ်သလေဗျာ။ ကျုပ်တို့စာထုတ်ထားပေသားကပဲ၊ ဟောဒီမှာ ရော့။ မြန်မာအိမ်အကူများ စင်ကာပူသို့လာခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားပါသည် ဆိုတဲ့စာ။
ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါဆို ဒီစာကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာလေး ပေးပါ။ ဒီစာကိုပြပြီး MOM ကို သွားပြောရအောင်။ မြန်မာအစိုးရက ပိတ်ထားပါလျက်ကနဲ့ စင်ကာပူက ဘာဖြစ်လို့ IPA letter ထုတ်ပေးရသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်း သွားပြောမယ်။
အဲဗျာ။ ဒါက တရားဝင်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဘယ် အင်္ဂလိပ်လိုပေးလို့ဖြစ်မတုံး မယ်မင်းကြီးမရဲ့။
တရားဝင်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆို၊ ဒါက တရားမ၀င်တဲ့စာလား။ တရားမ၀င်တဲ့စာကို ဘာဖြစ်လို့ ထုတ်သလဲ။
အဲ . . အဲ . . ဒါ . . ဒါ . . က . . က . . . ဟို မြန်မာတွေသိရအောင် ထုတ်သလေဗျာ။
ကျမတို့သိရုံနဲ့ ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူး။ ဒါကို ဘာဖြစ်လို့ စင်ကာပူအစိုးရကို တရားဝင်အကြောင်းမကြားသလဲ၊ အဲဒီလို အကြောင်းကြားထားရင် ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေ ဖြစ်လာစရာ မရှိဘူး။ ကျမကို ရှင်တို့ သံမှူးနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးပါ။
သူက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ ကျမလဲ တော်တော်ဒေါသထွက်တာနဲ့ အော်ဟစ်ငိုပလိုက်တယ်။ သူတို့ကျမကို ဘာတစ်ခုမှ လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ ကျမလဲ သူတို့ရှေ့မှာတင် MOM ကိုလှမ်းဖုံးဆက်တယ်။ ကောင်တာက ဒီကိစ္စသူရှင်းမပေးနိုင်တာ တောင်းပန်ပါတယ်။ သူ့အထက်အရာရှိနဲ့ တွေ့ရအောင် MOM ကိုလာခဲ့ပါလို့ ခေါ်တယ်။
ဒါနဲ့ ကျမ MOM ကို သွားတယ်။ ပြောရမှာ ရှက်လဲရှက်ပါရဲ့ရှင်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသံရုံးက ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆက်ဆံလိုက်သမျှ MOM က ကျမကို တကယ့်ကို ဖေးဖေးမမနဲ့ တထိုင်ထဲမှာ အကုန် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
ကျမ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ သူတို့က အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ပြောပါလို့ ပြောတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မြန်မာအစိုးရက ပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတော့ သူတို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လုပ်လို့ရသမျှ အကုန်လုပ်ပေးပါမယ် တဲ့။
ပထမဆုံး ခုခေါ်မဲ့ကလေးမရဲ့ IPA letter က တစ်လသက်တမ်းပဲ ရှိတာကို သက်တမ်းတိုးပေးတယ်။ တကယ်လို့ တစ်လအတွင်း မလာနိုင်ခဲ့ရင် အဆင်ပြေအောင်။ နောက်ပြီး သူဝင်လာလို့ရှိရင် ဘာအစစ်အဆေး အမေးအမြန်းမှ မရှိစေရဘူး။ ချောချောမောမော ၀င်လာနိုင်အောင် သူတို့ ICA ကို သတင်းပို့ထားလိုက်မယ် လို့ ပြောတယ်။ နောက်ပြီး ကလေးမသင်တန်းတက်ဘို့ စီစဉ်ထားတာကိုလည်း ရက်ရွှေ့ပေးလိုက်တယ်။
အကယ်၍များ မြန်မာအစိုးရက ခွင့်မပြုလို့ ဘယ်လိုမှလာလို့မရခဲ့ရင်တောင် တင်ထားတဲ့ security bond, medical insurance, သင်တန်းကြေး အားလုံးကို သူတို့ settle လုပ်ပေးမယ် လို့ပြောတယ်။ နောက်ပြီး ခုကလေးမက အချိန်မီ ရောက်မလာခဲ့လို့ လက်ရှိ အိမ်အကူကလည်း သက်တမ်းကုန်ပြီး ပြန်ရမယ်ဆိုရင် ကြားထဲမှာ ဘယ်သူမှမရှိပဲ ဒုက္ခရောက်မှာ စိုးလို့ လက်ရှိ ၅ ရက်နေ့မှာ သက်တမ်းကုန်တော့မဲ့ အိမ်အကူရဲ့ ၀ပ်ပါမစ်ကိုလည်း ချက်ချင်း သက်တမ်းတိုးပေးလိုက်တယ်။
ကျမ ပထမကလေးက ငယ်သေးတော့ နင် အိမ်အကူ နှစ်ယောက်ခေါ်ချင်လည်း ခေါ်လေ။ တကယ်လို့ ခေါ်ချင်သပဆိုရင် လက်ရှိ အိမ်အကူကို သက်တမ်းတစ်နှစ် ထပ်တိုးပေးမယ်တဲ့။
ဆိုတော့ ကျွန်မလည်း ၀မ်းနည်းတာနဲ့ မျက်ရည်ကျမိတယ်။
အို အို၊ ဘာမှ ၀မ်းမနည်းပါနဲ့။ ငါတို့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ် ဆိုပြီး အဲဒီအရာရှိက ကျမကို ရေတိုက်လိုက်ပါ သေးတယ်။
၀မ်းနည်းသည်မှာ သူမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ အဖေအရင်းက နှိပ်စက်သည့်ဒဏ် မခံနိုင်သောကြောင့် ပထွေးဆီခိုလှုံနေရရာ ပထွေးက အဖေအရင်းထက် ပိုကောင်းနေသောကြောင့် ၀မ်းနည်းမိခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းသူပြည်သားများ၏ အနှီဒုက္ခသုက္ခများမှ လွတ်ကင်းစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြရမည်။
ထိုသို့လုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးကား လက်တကမ်းမျှသာ လိုတော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အိပ်မက်များအတိုင်း ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု (အကြီးအကျယ်) မျှော်လင့်မိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းသူပြည်သားများစိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာနှင့် လူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ တူတူတန်တန် နေရမည့်တစ်နေ့ကို မလွဲမသွေ ရောက်ကြရလိမ့်မည်။
၃ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၅
မှတ်ချက်။ ။ Security bond မှာ စင်းဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဖြစ်ပြီး medical insurance မှာ စင်းဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by အေးငွိမျး at 12:44 PM0comments Links to this post
ယနေ့ သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်မိပြီး ၀မ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်ရသည်။
၀မ်းသာရသည့်သတင်းမှာ ဆရာဦးရန်လင်းတို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသစ်တွေ နေပြည်တော်သို့ အိတ်စ်ပရက်စ် ကားကြီးများဖြင့် ထွက်ခွာသွားသည့်သတင်းဖြစ်ပြီး -
၀မ်းနည်း၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်မှာ ကျူးကျော်ဆိုသူများ၏ နေအိမ်များကို ဘူဒိုဇာများဖြင့် ဖြိုဖျက်ပစ်နေသော ဗီဒီယို သတင်းကို ကြည့်ရ၍ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကို အူအသည်းပြောင်းပြန်လှန်ကာ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေသော၊ ချေးကို ခွေးနိုင်သည့်ပမာ ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းသူပြည်သားများကို ၎င်းတို့၏ လက်အောက်ငယ်သားများပမာ နိုင်ချင်တိုင်းနိုင်နေသော၊ တိုင်းသူပြည်သားများအား အေးအေးချမ်းချမ်းနေရစေရန် မကောင်းသူ၊ လူဆိုးသူခိုးတို့ရန်မှ ကာကွယ်ပေးရမည့်အစား၊ လူဆိုးသူခိုးများကို မြေတောင်မြှောက်ပေးကာ တိုင်းသူပြည်သားများကို ရမယ်မျိုးစုံရှာကာ ဒုက္ခပေးနေသော၊ ရမည်ဆိုလျှင် ဘနဖူးကိုပင် သိုက်တူးမည့်သူများကား အမိုက်ဇာတ်သိမ်း၍ တစ်ခန်းရပ်ပေတော့မည်။ အနှီသကောင့်သားများကို တော်တော်စောစော ကတည်းက သံပုံးတီးကာ တောထုတ်ပစ်ချင်နေသော ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒများ ယခု ပြည့်ဝခဲ့ပေပြီ။
၎င်းတို့နေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အားတက်သရော၊ မျှော်လင့်တကြီးဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်အစစ်များ အစားထိုးဝင်ရောက်လာရန် လက်တစ်ကမ်းသာ လိုတော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ကိုးစားသော ခေါင်းဆောင်ကြီးကား ၎င်း၏ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို အတင်းမောင်းနေတာတွေ့ရတော့ ဘယ်သူမကြိုက်ကြိုက်၊ ကျွန်တော်ကတော့ အလွန်သဘောကျလှပေသည်။ ပြည်သူများကို ဦးဆောင်မှုပေးမည့်သူများသည် သူများထက် ခေါင်းတလုံးသာနေမှ ဖြစ်မည်မဟုတ်လော။ သူက မဟုတ်တာလုပ်လို့ကတော့ ဘယ်သူ့မှ ချမ်းသာမပေးဘူးဟု ခပ်တင်းတင်းကြေငြာချက်ကို ပိုကြိုက်သေးသည်။ အစိုးရကောင်းတစ်ခုဖန်တီးယူဘို့ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေနှင့်ဆို ပိုတောင်မလွယ်သေးသည်။ သည်အကြောင်းများကို ခရေစေ့တွင်းကျ သိထားသဖြင့်လည်း သည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သိကြားမင်း ကျွဲယောင်ဖန်ဆင်းပြတာတောင် ချိုနည်းနည်းကားသေးသည် ဟု ဝေဖန်သော လူ့လောကကြီးတွင် မည်သူ အကဲ့ရဲ့ လွတ်ပါသနည်း။ ပြောချင်ရာပြောကြပါစေ။ ကိုယ်လုပ်တာ မှန်နေဘို့ အရေးကြီးသည်။ လူတွေပြောတိုင်းသာ လျှောက် နားယောင်နေရလျှင် ဟို သားအဖနှင့် မြည်းတစ်ကောင်လို ဖြစ်နေပေမပေါ့။
ယခု ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော်ကို လာရောက်လေ့လာသည့် သတင်းကိုဖတ်ရတာ ကျက်သရေရှိလှပါဘိတောင်း။
ကျန်စစ်သားမင်းကြီးက ငါ၏ ညာလက်ရုံးဖြင့် ပြည်သူပြည်သားတို့ကို စားသောက်စရာများပေးပြီး ငါ၏ ဘယ်လက်ဖြင့် ပြည်သူတို့အား အ၀တ်ပုဆိုးကိုပေးအံ့ ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ယခု မင်းဆိုးမင်းညစ်များကတော့ ပြောင်းပြန်။ ငါတို့၏ ညာခြေဖြင့် ပြည်သူတို့၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်များကို ရိုက်ချိုးပြီး ငါတို့၏ ဘယ်ခြေဖြင့် ပြည်သူတို့၏ မျက်ရည်ဖြင့် ခြေဆေးအံ့ ဟု ခံယူထားလေသလော မပြောတတ်။
၎င်းတို့လုပ်သမျှ အများပြည်သူအဖို့ တစ်ကွက်မှ စိတ်ချမ်းသာစရာမရှိ။ တစ်ကွက်ကလေးလောက် စိတ်ချမ်းသာစရာ၊ သာဓု ခေါ်စရာကလေးများရှိလျှင်ပင် မပြောလိုပါ။
ယခုတော့ ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်မို့လို့။ ဖားကန့် ဖားကန့် မို့လို့။ လက်ပံတောင်း လက်ပံတောင်း မို့လို့။ လက်ပံတန်း လက်ပံတန်း မို့လို့။ လုပ်သမျှ အကုန် အရာရာနှင့် အကြောင်းကြောင်းချည်း ဖြစ်၏။
လူကောင်းတွေ ထောင်ထဲထည့်ပြီး ခုနစ်ခါပြန် ရှစ်ခါပြန် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ထားသူကျတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပေးလိုပေး။ ဤသည်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူတို့အပေါ်ထားသော ၎င်းတို့စေတနာကို အကွက်လိုက် အကွင်းလိုက်မြင်နိုင်ပေသည်။
ငါရာထူးကမပြုတ်ခင် ကျူးကျော်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကို အကုန်ဖယ်ပစ်မယ်ဆိုကာ နေအိမ်များကို အသားလွတ် excavator ကြီးများဖြင့် ဖြိုဖျက်ပစ်သတဲ့။ ဗီဒီယိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်မှာ မျက်ရည်များပင် ၀ိုင်းမိပါသည်။ စိတ်မကောင်းလိုက်သည်မှာ ပြောစရာမရှိ။
လက်နက်အားကိုးဖြင့်၊ အာဏာရှိတိုင်း ဘယ်ခွေးမှ လူမထင်ဘူးကွ ဆိုကာ ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်းနေသည်ကို တားမည့်သူ မရှိတော့ပြီလော။ ထစ်ကနဲရှိ လက်နက်အားကိုးဖြင့် အတင်းအဓမ္မ အနိုင်ကျင့်ဖြေရှင်းသည့်နည်းမှာ ၎င်းတို့၏ တစ်ခုတည်းသော မဟာဗျူဟာ ဖြစ်ပေသည်။ သူရို့ပထွေးတွေ ကားကြီးကားငယ် အသွယ်သွယ်ဖြင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲ ၀င်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက်၊ ရှိသမျှမြေကြီးကို အ၀ီစိရောက်အောင် တူးနေတာကျတော့ ဘာလေသံမှတောင် မဟရဲ။ ကိုယ့်ပြည်သူတွေကျတော့ ဘယ်နေ့အပြီးဖယ်ပေးပါ။ ဖယ်မပေးရင်တော့ အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမယ် ဟု ရာဇသံ ပေးခဲ့သည်။ သြော် - တယ်လဲ အားကိုးချင်စရာကောင်းလိုက်ပါတဲ့ သူရဲဂေါင်းကြီးများပေပ။
သည် ကျူးကျော်ဆိုသူများ၏ နောက်ကြောင်းကို ကျွန်တော် မသိပါ။ သို့သော် အိမ်နှင့်ယာနှင့် နေနေသူများကို အတင်း အဓမ္မ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်တာ ကိုယ်လုပ်တာ မှန်သလားဆိုတာ နည်းနည်းလောက် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဒီနေရာကို ဘယ်သူပိုင်တာလဲ။ (အဓမ္မသိမ်းထားတာ မဟုတ်ဘဲ တကယ့်ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်)
အဲသည် ကျူးကျော်ဆိုတဲ့သူတွေ ဘယ်နေရာက ရောက်လာတာလဲ။
သူတို့ကို ဘယ်သူက နေခွင့်ပေးတာလဲ။
သူတို့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ နေနေကြတာလဲ။
သူတို့ကို ဒီနေရာကနေဖယ်မယ်ဆို ဘယ်နေရာမှာနေဘို့ အစားထိုးပေးမလဲ။
ကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေဆို ကျောင်းတက်ရ အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုစီမံပေးမလဲ . . .
ဤနေရာတွင် နေထိုင်နေကြသူများသည် လူများမဟုတ်ပါလား။
သူတို့တွင် မိသားစုများ မရှိပါလား။
သူတို့အိမ်များကို အတင်းအဓမ္မ၀င်ဖျက်လို့ အိမ်တွေပျက်သွားရင် အသစ်ပြန်ဆောက်စရာ ပိုက်ဆံရှိပါ့မလား။
အကယ်တန်တု ထို ကျူးကျော်များသည် မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမှ မရှိ။ မည်သည့်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မှ မရှိပဲ နေထိုင်သည်ဆိုလျှင်ပင် ၎င်းတို့ကို တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရအောင် စီစဉ်မပေးသင့်ပါသလော။
ထိုင်းနှင့် မလေးရှားတွင် တရားမ၀င်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ သိန်းနှင့်ချီရှိသည်။
ထိုမြန်မာလုပ်သားများကို ထိုင်းနှင့် မလေးရှားအစိုးရက တရားဝင်နေထိုင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရအောင် မကြာခဏ စီစဉ်ပေးလေ့ရှိ၏။
သူများအစိုးရက ကိုယ့်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲ တရားမ၀င်လာလုပ်နေတာတောင် တရားဝင်အောင်လုပ်ပေးနေသေးတာ -
ကိုယ့်အစိုးရက ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ နေနေတာကို အတင်းရောအဓမ္မပါ နိုင့်ထက်စီးနင်း နှင်ထုတ်နေသည် ဆိုတော့ -
ကျွန်ုပ်မှာ အဖြစ်ကတော့ မနှစ်ကနဲ့မတူပါ ဟုသာ ကုန်းအော် ငိုလိုက်ချင်ပါတော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းသူပြည်သားများသည် ရာဇတောဝါဘေးမှ ကင်းလွတ်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၈ ဇန္မ၀ါရီ၊ ၂၀၁၆ ၊ ၀၀း၂၆ နာရီ
Posted by အေးငွိမျး at 12:42 PM0comments Links to this post
စကားလေးတလုံးရလိုက် လျှောက်ဖွလိုက်နှင့် လူများတကာဖွတိုင်း ချေးကသေးကစ လျှောက်ဖွတာမျိုး ကျွန်တော် ၀ါသနာမပါပါ။ သို့သော် ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် ဟိုရေးသည်ရေး ရေးနေကြလေရာ အူယားလှသောကြောင့် မရှိမဲ့ရှိမဲ့အချိန်လေးတွေကနေ ဖဲ့ရေးလိုက်ရပြန်ပါပေ၏။
တခါသော် တက္ကသိုလ်ပြည်မှ ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးအထံသို့ ပညာသင်ကြားရန် မောင်ဖြူနှင့် မောင်မဲတည်းဟူသော ကျောင်းသားငယ်နှစ်ဦး တချိန်တည်း၊ တပြိုင်တည်း ရောက်လာကြလေကုန်သော ဟူသတတ်။
အိမ်ထဲဝင်လာကတည်းက ဆရာကြီးက ထိုသူငယ် နှစ်ဦးကို အကဲခတ်နေသည်။ ကျောင်းသားငယ်နှစ်ဦးမှာ တောလမ်းမှ လာကြရသည်ဖြစ်၍ ခြေထောက်တွင်ပေလာသော ရွှံှ့ဗွက်များကို အသီးသီး ဆေးကြောကြလေသည်။
မောင်ဖြူမှာ ရေကိုတန်ရုံလောင်းလျက် သေချာစွာပွတ်သပ်ဆေးကြောသည်ဖြစ်၍ ရေမကုန်ပဲ ခြေကို သန့်ရှင်းအောင် ဆေးနိုင်လေသည်။
မောင်မဲမှာမူ ရေကိုသာ တဗွမ်းဗွမ်းလောင်းသည်။ ခြေဖနောင့်မှ ရွှံ့များကို စင်အောင် မဆေးနိုင်။
သည်ကတည်းက ဆရာကြီးက မောင်ဖြူသည်သာ သင်သမျှအတတ်ပညာများကို ကုန်စင်အောင် ရနိုင်၍ မောင်မဲမှာမူကား ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခု ပိုင်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှတတ်မှာမဟုတ်ဟု အတတ်သိလိုက်ပြီဖြစ်၏။
သည်လိုနှင့် လေးနှစ်တာကာလပတ်လုံး တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးတွင် ပညာသင်ကြားကြပြီးသကာလ အသီးသီး အသက အသက ဘွဲ့လက်မှတ်များပိုက်ကာ ပြည်တော်ပြန်ကြလေသည်။
အပြန်တောလမ်း၌ ချေးပုံကြီးများတွေ့လေသော် မောင်မဲက ဟိုက်၊ သောက်ကျိုးနဲ။ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ချေးပုံကြီးတွေဆိုမှတော့ နည်းနည်းနောနော အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူး ဟု ကြောက်လန့်တကြား ပြေးမည်ပြု၏။ မောင်ဖြူက နေစမ်းပါဦးကွာ၊ ငါကြည့်စမ်း ပါရစေဦးဟု ချေးပုံကြီးကို သေချာစွာကြည့်လေသော် ၀ါးရွက်များနှင့် အသီးအရွက်များသာ တွေ့သည်ဖြစ်၍ ဒါဆင်ချေးပုံကွ ဟု အတတ်ပြောလေ၏။ ဟိုက် - ဆင်ချေးပုံဆိုတော့ ဒီအနီးအနားမှာ ဆင်ကြီးရှိမှာပဲ။ ငါတို့ကိုသာ တွေ့သွားရင်တော့ နင်းသတ်တာနဲ့ သေတော့မှာပဲ ဟု ကြောက်လန့်တကြား ပြေးထွက်သွားလေသည်။
မောင်ဖြူမှာမူကား အင်း - ချေးနဲ့သေးနဲ့နီးနေပုံထောက်တော့ ဒါဟာ ဆင်မကြီးပဲ။ နောက်ပြီး ရှေ့ခွာရာထက် နောက်ခွာရာက တော်တော်ကြီးပိုနက်နေတော့ ဇီးနဲ့ ဆင်မကြီးဖြစ်မယ်။ ခြေလှမ်းကို အလျင်စလိုလှမ်းသွားပုံပေါက်တော့ မီးဖွားခါနီးနေပြီ။ ငါတော့ ကော်တာပဲ ဟု အနီးတ၀ိုက်လိုက်ရှာလေသော် မီးဖွားခါစ ဆင်မကြီးကို သားကလေးနှင့်တကွ တွေ့လေ၏။ မောင်ဖြူလည်း ဆင်ကလေးကို ချော့မော့၊ ဆင်မကြီးကို ခေါင်းပွတ်၊ ကိုယ်ပွတ်နှင့် အသာအယာချြော့မှုလေရာ ဆင်မကြီးမှာ တခဏအတွင်း ယဉ်ပါးသွားလေ၏။
ရွာအတွင်းသို့ ဆင်မကြီးစီးဝင်လာသော မောင်ဖြူကိုတွေ့လေသော် မောင်မဲမှာ တအံ့တသြနှင့် လာရောက်မေးမြန်း။ အကြောင်းစုံ သိရလေသော ဤသို့တွေး၏။
အင်း၊ အတော်မတရားတဲ့ဆရာကြီးပဲ။ မောင်ဖြူကိုတော့ ပညာကုန်သင်ပေးလိုက်ပြီး ငါ့ကျတော့ ပညာတွေ သျှိုထားတယ်။ အခု ကြည့်စမ်း၊ ချေးပုံတွေ့တာချင်းအတူတူ မောင်ဖြူကျ အကုန်သိနေတယ်။ ငါကျ ဘာမှ မသိဘူး။ ဆရာကြီးကို သွားကွန်ပလိန်း လုပ်မယ်။
သို့နှင့် မောင်မဲလည်း ဆရာကြီးထံ ပြန်ရောက်လာလေ၏။ ဖြစ်ကြောင်းရယ်ကုန်စင် သတင်းကြားပြီးဖြစ်သော ဆရာကြီးမှာ မောင်မဲပြန်လာမည်သိသဖြင့် မအံ့သြတော့ချေ။
လာရင်းကိစ္စကလေးများ လင်းစမ်းပါအုံး မောင်ရဲ့ ဟု ဆရာကြီးက မသိဟန်ဆောင်ပြီး မေးလေသော် -
ဘာဖြစ်ရမတုံး ဆရာကြီးရယ်၊ ပိုက်ဆံအတူတူပေးသင်တဲ့ တပည့်ချင်းအတူတူ မောင်ဖြူကျတော့ ပညာအကုန်သင်ပေးတယ်။ ကျွန်တော့်ကျတော့ ပညာတွေ သျှိုထားတယ်။ အဲဒါ မကျေနပ်လို့ လာခဲ့တာပဲ။
ဒါကဒီလိုရှိသကွဲ့မောင်ရဲ့။ မောင်ဖြူက ပညာတွေလိုချင်တော့ ဆရာကြီးယိုတဲ့ ချေးကို တစ်နေ့တပုံကုန်အောင် စားတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူ့ကို ပညာကုန်သင်ပေးလိုက်တာပဲ။ တကယ်လို့ မောင်လည်း မောင်ဖြူ့လို ဆရာကြီးချေးကို စားနိုင်မယ်ဆိုရင် သင်ပေးမှာပေါ့ကွယ်။
အာ၊ ဒါလေးများ ပြောပြောက စောရောပေါ့ ဆရာကြီးရယ်။ ပညာသာတတ်မယ်ဆို ကျွန်တော် တပုံမဟုတ်ဘူး၊ သုံးပုံစားဆိုလဲ စားပါမယ် ဆရာကြီး။
သို့နှင့် ဆရာကြီးလည်း တပည့်တစ်ယောက်ကိုခေါ်ကာ ခိုင်းလိုက်၏။ တပည့်လည်း ထန်းလျက်နှင့် ငှက်ပျောသီးကို ရောနယ်လျှက် အပေါက်ဖောက်ထားသော ၀ါးကျည်တောက်အတွင်းမှ ငှက်ပျောဖက်ပေါ်သို့ ညှစ်ချလိုက်သော် လူလုပ် အီအီးပုံကလေး ရလေတော့၏။
ဆရာကြီးလည်း အိမ်သာအတွင်းသို့ ဟန်ပြ၀င်ကာ မောင်မဲကိုခေါ်လျက် မောင်မဲရေ၊ ဆရာကြီးတော့ အီအီးပါခဲ့ပြီဟေ့၊ သွားစားချေတော့ ဟု ဆိုလေသော် မောင်မဲလည်း အိမ်သာတွင်းသို့ အီအီးစားရန်ဝင်၏။
ငှက်ပျောသီးနှင့်ထန်းလျက်ရောထားသော အီအီးအတုများကို စားလျက် မောင်မဲတွေးသည်မှာ အင်း၊ ပညာရှိများ အီအီးတောင်မှ မွှေးလို့ချိုလို့။ စားလို့တောင်ကောင်းသေး။
အိမ်သာတွင်းမှ ပြန်ထွက်လာသော မောင်မဲကို ဆရာကြီးက . . . ဘယ့်နှယ်လဲဟေ့ မောင်မဲ၊ စားခဲ့ပြီလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ စားခဲ့ပြီးပါပြီ ဆရာကြီးခင်ဗျာ။ ဆရာကြီးတို့လို ပညာရှိများမတော့ ယိုတဲ့ချေးတောင် မွှေးလို့ချိုလို့ပါလား ဆရာကြီးရယ်။
ကိုင်း၊ ကိုင်း၊ မောင်။ အေးအေးဆေးဆေးသာ ပြန်ပါတော့။ ငှက်ပျောမှန်း ချေးမှန်းတောင် ခွဲခြားသိနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ မောင့်လိုလူမျိုးကို ဆရာကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပညာတတ်အောင် သင်ပေးဘို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူငယ်များ အင်တာနက်ကို အလွဲသုံးပြီး အချိန်ဖြုန်းနေကြောင်း ပြောသည်ကို ဘာကိုဆိုလိုလို့ ဆိုလိုမှန်းမသိ။
အဖွားကြီးက အိမ်တွင်းအကျယ်ချုပ်ကျနေတော့ ဖုန်တက်နေတဲ့ စာအုပ်ကလေး သုံးလေးအုပ်ပဲ ဖတ်ဖူးတာ။ အင်တာနက်တို့ အွန်လိုင်းတို့ဆိုတာ ဘာမှ နားလည်တော့တာ မဟုတ်ဘူး . . . တို့ ပြောတာက တဖွဲ့။
ဟေ့ကောင်တွေ၊ ဒေါ်စုဆိုတာ ဟောမှာကြည့်စမ်း။ မင်းတို့မမွေးခင်ကတည်းက ကွန်ပြူတာ သုံးလာတာကွ . . . ဆိုတာက တဖွဲ့။
ဖွဘုတ်ကို အသုံးချလျက် ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ထင်ရာရမ်းတုတ်ကြကုန်သော မောင်မယ်အပေါင်းတို့အား . .
ငှက်ပျောမှန်း၊ ချေးမှန်းသိအောင် အားထုတ်ကြပါ ဟု တိုက်တွန်းလိုက်ရပါ၏။
၁၉ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၆။ ည ၁၀း၀၅ နာရီ
Posted by အေးငွိမျး at 12:32 PM0comments Links to this post
Posted by အေးငွိမျး at 12:29 PM2comments Links to this post